Global Voices teny Malagasy » Eritreritra tsy tanan’ny mpiserasera amin’ny fahazato taona an’i Czechoslovakia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2018 8:01 GMT 1	 · Mpanoratra Tibor Blazko Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Repoblika Tseky, Slovakia, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vaovao Tsara
Sary avy amin'ny pejy Facebook fanentanana ny taonjato Tseky sy Slovaky, nokarakarain'ny Sapandraharahan'ny Fizahantany Tseky, tohanan'ny minisitera tseky misahana ny fampandrosoana ara-paritra.
Ny oktobra 2018 no manamarika ny fahazato taona nanambaràn'i Czechoslovakia  ny fahaleovantenany avy amin'ny Ampira Aostro-Hongroà ary efa napetraka ho fanjakana manana ny fiandrianany talohan'izany. Na dia nizara roa ho Repoblika Tseky sy Repoblikan'i Slovakia tao anatin'ny fandriampahalemana aza i Czechoslovakia  75 taona teo ho eo taty aoriana, dia nanamarika ny fahazato taona tamin'ny alalan'ny resadresaka an-tserasera momba ilay fanjakana izay nanambatra azy taloha ny mpiserasera avy ao Slovakia.
Daty iray teo amin'ny tantara
Ho an'ny maro tamin'ireo olom-pirenena sy ny taranany ankehitriny izay efa tonga taona, izany Czechoslovakia izany dia midika ny fototry ny demaokrasia sy ny fanambinana, raha misy kosa ny hafa mihevitra izany ho ‘Fonjam-pirenena’ kelikely kokoa  — endrika iray amin'ny anaram-bositra nomena ny fitondram-panjaka tokana Aostro-Hongroà .
Raha mamihina ny tsingerintaona sy mankalaza azy ho “Taonjato tseky sy slovaky”  ny Repoblika Tseky, dia misara-kevitra kokoa ny hevitra ao Slovakia. Nanomboka fankalazana ofisialy ny praiminisitra Slovaky Peter Pellegrini, fa raha tokony nankalaza ny 28 oktobra Czechoslovak mahazatra izay ankalazaina ao Prague  renivohitry ny Repoblika Tseky, dia nafindrany tamin'ny fetin'i Bratislava  tamin'ny 30 oktobra izany. Io daty io no manamarika ny tsingerintaonan'ny Fanambaràn'i Martin  izay mifantoka kokoa amin'ny hetsika Slovaky.
Iray amin'ireo olona tsy nankasitraka izany dingana izany ny mpikambana iray ao amin'ny parlemanta, Miroslav Sopko , izay nanoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Zato taona no nandalo”  :
Efa ela isika no tsy nianatra ny hanana hambom-po tamin'ny repoblika niraisana, izay naningana tao anatin'ny vanim-potoanan'ny demaokrasia tao Eoropa afovoany, tao anatin'ny folo voalohany amin'ny firenena nandroso indrindra teto ambonin'ny tany, efa nanan-jo hifidy hatramin'ny voalohany ny vehivavy, nisokatra ho antsika ny vavahadin'i Eoropa, efa nihanisonga ny fitomboana ara-panabeazana sy ara-kolontsaina. … Na izany aza dia tsy nahita ny fahefana hankatoa fetim-panjakna isika fa mbola nanampy peta-taratasy indray mandeha ho an'ny tsikala-pieritreretantsika ao amin'ny 30 oktobra.
Hita ho nanjaka tamin'ireo bilaogy miankina amin'ny gazety lehibe ny tsiaro tsara. Namehy ny fahatsapany  momba ilay fanjakana teo aloha ary nampitahainy tamin'ny fisaratsarahana maherisetra nahazo ny federasiona Balkanan'i Yogoslavia i Jakub Tinak, mitazona pasipaoro Tseky, sy Slovaky ary miteny Tseky, Slovaky ary Hongroà:
Faly aho fa fantatry ny firenentsika ny fananganana fanjakana iraisana ary hain'izy ireo ihany koa ny nisaraka am-pilaminana.
Radoslav Hodor nanome hevitra fa nahafeno ny anjara toerany ara-tantara ho herin'ny tsara i Czechoslovakia :
Na izany aza, raha tsy jerena ireo fahadisoana rehetra, dia tetikasa tsara ho an'ny firenena roa i Czechoslovakia. Io no namela ny Tseky hifandray amin'ny naha-fanjakana azy ireo tamin'ny fitondram-panjaka Tseky tamin'ny vanim-potoana antenantenany sy nahafahan'ny Slovak hanangana ny azy ireo. Tsy hisy fanjakana hafa hanome vintana tsara tahaka izany.
Stanislav41 nanondro fa efa napetraka tamin'ny fanambaràna ny repoblika  zato taona lasa izay ny fanorenana ny demaokrasia tao Slovakia:
Hahitana matso miaramila ihany koa ny fahazato taona – mazava loatra fa ao Prague, … ary raha tsara ianao, ny fandraisantsika anjara no fanamafisana fa … tsy miankina amin'inona fa tsaratsara kokoa ho antsika aza izany …
Mpandray anjara tamin'ny fankalazana tao Prague. Sary avy amin'ny pejy Facebook fanentanana ny taonjato Tseky sy Slovaky, nokarakarain'ny Sapandraharahan'ny Fizahantany Tseky, tohanan'ny minisitera tseky misahana ny fampandrosoana ara-paritra.
Mbola matanjaka dia matanjaka ny fifandraisan'ny roa tonta, maro ireo mpianatra no misafidy ny hanovo fianarana oniversite any ampitan'ny sisintany ‘tao anatin”i Czechoslovakia” taloha. Tamin'ny taona 2013, tany Slovakia no nahitana ny vondrona Tseky mianatra any ampita  betsaka indrindra, raha Slovak  no mandrafitra ny 8,9% tamin'ny mpianatra oniversite tao amin'ny Repoblika Tseky tamin'ny taona 2016.
Nahatsapa i Patrik Ölvecký fa na dia natao tamin'ny andro samy hafa aza ny fankalazana ofisialy, dia mbola mifanakaiky toy ny mpirahalahy ny vahoaka Slovaky sy Tseky.
Eny fa na dia ho ahy izay tsy niaina izany Czechoslovakia izany aza… ny dimy taona nianarako tany Prague no nahitako da mahatalanjona ny fifandraisantsika. Mahafinaritra tanteraka ilay hoe akaiky dia akaiky ilay firenena hafa.
Nanoratra momba ireo zavatra iraisana manokana amin'ny “firenena iray tsy mbola niainako mihitsy, saingy ho tanindrazako mandrakariva” ihany koa i Lukáš Račko, mpianatra .
Zavatra tsy manam-paharoa mihitsy, ary mponina vitsy eto ambonin'ny tany ihany no afa-maka sary izany an-tsaina. Mba saino fotsiny anie hoe mihofahofa manerana ny mozea nasionalin'i Kosovo ny sainam-pirenena Serba na ny mifamadika amin'izany.
Satria dia izany indrindra no mitranga amin'izao fotoana izao ao Prague, fa mihofahofa ao amin'ny lapan'ny mozea nasionaly manan-tantara vaovao ihany koa ny saina Slovaky.
Raha manoratra amin'ny fiteny Tseky ao amin'ny sehatra bilaogy slovaky, nizara i Michal Ruman  fa ho an'ny olona manana ray aman-dreny (na havana) Tseky sy Slovaky tahaka azy, dia tsy misy ny zavatra niova hatramin'ny fivakisana — tsy maintsy nitondra ny pasipaorony fotsiny ry zareo raha miala avy ao amin'ny anankiray mankao amin'ny faharoa. Nofaranany tamin'ny naoty tena manokana avy aminy:
27 Oktobra, andro mialoha ny tsingerintaonan'ny fanjakana niraisana… manana anaran'andro ao amin'ny kalandrie tseky ny zanakay vavy. Ny [zazavavy] Czechoslovak-nay. Sisa tavela tamin'ny fitambarana tsara tarehy tamin'ny maripoko roa hafahafa. …Ny tsara indrindra rehetra ry Zoe!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/23/130680/
 hafa mihevitra izany ho ‘Fonjam-pirenena’ kelikely kokoa: https://www.cardiff.ac.uk/news/view/532297-czechoslovakia-the-state-that-failed
 fitondram-panjaka tokana Aostro-Hongroà: https://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary
 mankalaza azy ho “Taonjato tseky sy slovaky”: https://czechandslovakcentury.com/en
 Fanambaràn'i Martin: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Declaration
 “Zato taona no nandalo”: https://dennikn.sk/blog/1279712/preslo-sto-rokov
 Namehy ny fahatsapany: https://jakubtinak1.blog.sme.sk/c/494979/cechoslovak-zahladeny-k-balkanu.html
 nahafeno ny anjara toerany ara-tantara ho herin'ny tsara i Czechoslovakia: https://dennikn.sk/blog/1272294/ceskoslovensko-sa-svojej-storocnice-nedozilo-ale-svoju-historicku-ulohu-naplnilo
 fanambaràna ny repoblika: http://stanislav41.blog.pravda.sk/2018/10/28/pred-100-rokmi-sme-sa-stali-republikou
 Tseky mianatra any ampita: https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/5447925?fid=5690725